antso hivavaka | Aprily 2009 |
RÃ©vÃ©il Ã Ouganda
Izao fotoana izao dia fotoana tian’Andriamanitra hanehoana amintsika Malagasy rehetra ny voninahiny sy ny fahefany satria efa vavaka nataontsika mianakavy izao dia ny mba hitodihan’ny Malagasy rehetra sy hiverenantsika amin’Andriamanitra. Noho izany ry Kristianina havana dia aoka tsy hatahotra na hanahiahy na dia kely akory aza isika satria efa fandaharan’Andriamanitra, ary azo lazaina mihitsy aza fa valim-bavaka izao. Raha jerena tokoa mantsy ny Baiboly sy ny tantaran’ny zanak’Israely talohan’ny nitondran’Andriamanitra azy ireo hiala tao amin’ny tany Egypta dia mampiseho amintsika ny zavatra mitovitovy amin’izao toe-draharaha misy eto Madagasikara izao. Voasoaratra fa Andriamanitra mihitsy no nanamafy ny fon’i Farao mba hampijaly ny zanak’israely. Satria, raha toa ka tsy nahatsiaro fangirifirina teo ambany fanandevozan’ny Egyptiana izy ireo dia tsy hahalala velively ny hiantso sy hitodika amin’Andriamanitra, na koa raha mbola zakany ihany ny fampijaliana natao azy dia hihevitra izy fa ny tenany ihany dia mety hahavotra azy. Ny tantara rehetra amin’ny bokin’ny Eksodosy, nandritry ny nitondran’i Mosesy ny zanak’Israely dia manamarina izany toe-pon’ny olona izany ; satria rehefa hitan’izy ireo fa afaka teo ambany vahohon’ny Egyptiana izy ireo dia nanadino indray ny fitiavan’Andriamanitra ary nanao izay mifanohitra amin’ny lalàna nomena azy. Tonga hatramin’ny famoronana andriamanin-kafa sy ny fanompoan-tsampy. Rehefa tezitra tamin’izy ireo indray Andriamanitra ka nanisy loza ho azy ireo sy nandefa fahavalo teny an-dalàna dia mbola zavatra mampalahelo koa no nataony satria vitan’izy ireo ny nilaza fa naleony ihany tany amin’ny tany nahandevozana toy izay hiharitra ny fahoriana teny amin’ny tany efitra. Mamindra fo anefa Andriamanitra ary mitazona mandrakizay ny fanekena efa nataony dia ny hitondrany ny zanak’Israely, vahoaka nofidiany, ho an’ny tany tondra-dronono sy tantely izay efa nampanantenainy. Koa mampieritreritra anao aho amin’izao fotoana izao. Ny zava-misy eto amin’ity firenena malalantsika ity dia tsy fitsapana fotsiny ho antsika kristiana akory fa fifohazam-panahy lehibe kosa hibanjinantsika an’i Jesoa Kristy irery. Valim-bavaka tokoa izao satria ren’Andriamanitra ny antsontsika izay mitalaho mafy ny mba hibebahan’ny vahoaka Malagasy. Raha tsy misy izao zavatra miseho izao dia mbola hirehareha foana ny olona, hampanjaka ny ambo-pony, tsy hitsinjo sy tsy hihevitra ny hafa sns.Diniho fa tsy maintsy mandalo sedra sy afo mahamay avokoa ny zavatra rehetra vao mahita fahatsarana : isan’izany ny tantaran’i Joba, torak’izany ny fanefena volamena izay tsy maintsy amin’ny alalan’ny afo, eo koa ny fanaovana mofomamy izay mbola miditra lafaoro vao mahazo ilay endrika sy tsiro tadiavina aminy. Koa meteza ny fontsika ho tefena ary aza mitaraina kely akory fa angataho amin’Andriamanitra ny fahatokiana feno fa Izy manana hevitra tsara sy mahasoa antsika. Isaory Izy afaka nanome izao toe-javatra izao hampiorina mafy antsika ao aminy. Koa na inona hiseho na inona hitranga ho an’ny ampitso dia isika efa manantena fa Andriamanitra tsy mivadika amin’ny fanekeny («Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny» II Tantara 7 :14). Mahareza ary ataovy ho hitan’izao tontolo izao fa manana Andriamanitra tia antsika ary tiantsika isika Malagasy. Tsarovy ho antsika kristiana fa izao tontolo izao tsy mba manana Baiboly ho jereny ary na manana ihany aza tsy mba mamaky sy miaina izany ka tsy mahita ny fahatsaran’Andriamanitra sy ny fahasoavana izay atobany isan’andro isan’andro. Koa noho izany, tandremo ny fihetsika sy ny fihevitra ary ny atao ; fa isika izao no Baiboly vakian’ny olona sy fahazavan’i Kritsy ety amin’izao tontolo izao. Ialao ny fampielezana ny vaovao tsy marina mety hiteraka korontana na mety hampifamaly na handranitra ady. Diniho tsara sy am-pieritreretana tony aloha ny teny avoaka : rehefa tsy fantatrao ny fahamarinany sy tsy anananao ny porofo azo antoka dia aleo tsy miteny. Tsy hahita tombontsoa amin’ny fampielezana izany isika; indrindra koa ka zavatra ratsy no tiantsika tenenina. Fahendrena ny mitondra izay hevitra ratsy lazain’ny hafa eo anatrehan’Andriamanitra. Mifonà ho azy ary ambarao aminy koa fa tsy mety ny manao vavolombelona mandainga na manaparitaka resaka izay tsy hiteraka voka-tsoa velively. Ndeha koa ho tononontsika aminy ny fiadan’ny Tompo ary ampatsahivintsika azy ireo fa ny fitrotroana am-bavaka ny tanindrazantsika aza no tena tokony atao sy ny milaza ny filazantsaran’i Kristy. Fa maninona tokoa hoe no rehefa vaovao ratsy sy tsy misy dikany dia malaky isika ny hanambara azy fa rehefa hizara ny vaovao mahafaly entin’ny Tompo ho antsika dia misalasala tanteraka sy toa tsy vonona velively isika? Efa im-betsaka isika no naheno feo miantso antsika Malagasy mba hifoha, efa impiry isika no naheno toriteny manentana antsika mba hampandroso an’i Jesoa Kristy ka handray azy aty anatintsika. Mbola hiandry rahoviana ihany ianao no ho vonona ?(sanatria hiandry hahita loza isan’andro vaky ve?). Ho amintsika anie ny fiadanan’ny Tompo.